Leaders Archives - Akhayar Media - Myanmar Lifestyle, Tech Review, Food Review
Leaders	What's New	What's Rising	What's Hot	What's New
အကြမ်းမဖက်နည်းလမ်းနဲ့ ဆန္ဒပြခဲ့ကြသူ ကမ္ဘာကျော်ပုဂ္ဂိုလ်များ
ကမ္ဘာပေါ်မှာ ဆန္ဒပြပွဲတွေ၊ အရေးအခင်းတွေ အမျိုးမျိုးအဖုံဖုံ ဖြစ်ပွားခဲ့ကြသလို ဆန္ဒပြပုံ ပြနည်းတွေလည်း အများကြီး ရှိခဲ့ကြပါတယ်။ တချို့ က လူစုလူဝေးနဲ့ ဆန္ဒပြကြသလို တချို့ကျတော့လည်း လူနည်းနည်းနဲ့ တချို့ကျတော့လည်း တစ်ကိုယ်တော်ဆန္ဒပြကြတယ်ပေါ့။ လူအင်အားအနည်းအများအပြင် ဆန္ဒပြနည်းကလည်း စုံပါ့ဗျာ။ ဆိုင်းဘုတ်ထောင်ပြီး ဆန္ဒဖော်ထုတ်တာတို့၊ ကြွေးကြော်တာတို့၊ အစာငတ်ခံတာတို့၊ ဒီထက် ပိုကြမ်းရင် ကိုယ့်ဘာသာကိုယ် ဓာတ်ဆီလောင်း မီးရှို့ပြတာတို့၊ ခု နောက်ဆုံး အသံတိတ် ဆန္ဒပြတာမျိုးအထိပေါ့။ 😀 ဒီလို ဆန္ဒပြတာတွေထဲမှ ကမ္ဘာ့သမိုင်းတစ်လျှောက် အကြမ်းမဖက် ဆန္ဒပြခဲ့ကြတဲ့ ကမ္ဘာကျော်ခေါင်းဆောင်ကြီးတွေထဲကမှ တချို့ကတော့… Mahatma Gandhi (မဟတ္တမဂန္ဓီ) ဂန္ဓီဟာ ငြိမ်းချမ်းစွာ ဆန္ဒပြတဲ့ သူတွေထဲမှာတော့ အကျော်ကြားဆုံးလူတစ်ယောက်ပါ။ အိန္ဒိယလူမျိုးတွေရဲ့ […]
အခုချိန်မှာ အောက်ခြေဘဝရောက်နေလို့ ဘဝမှာ ထိပ်ဆုံးနေရာမရောက်နိုင်ပါဘူးလို့ တွေးထင်နေကြတယ်။ တကယ်တော့ အသေးငယ်ဆုံး အလုပ်တွေကနေ ကြီးကျယ်မြင့်မြတ်တဲ့အလုပ်တွေဆီကို ကူးပြောင်းခဲ့တာ မလား။ ဒီတစ်ပတ်မှာတော့ သတင်းစာပို့သမားဘဝကနေ သမ္မတဘဝကို ရောက်ရှိသွားတဲ့ လူတစ်ယောက်ရဲ့အကြောင်းကို စိတ်အားတက်ကြွဖွယ် ဖော်ပြလိုက်ပါတယ်။ သူ့ကို အိန္ဒိယနိုင်ငံ Tamil Nadu ပြည်နယ် Rameswaram မြို့လေးမှာ ၁၉၃၁ခုနှစ် အောက်တိုဘာ ၁၅ရက်နေ့မှာ မွေးဖွားခဲ့ပါတယ်။ သူ့ဖခင် Jainulabudeen က စက်လှေပိုင်ရှင်တစ်ဦးဖြစ်တဲ့အပြင် ဒေသခံ ဗလီဝတ်ကျောင်းရဲ့ ရှေ့ဆောင် အိမာမ် (Imam) လည်း ဖြစ်ပါတယ်။ မိခင် Ashiamma ကတော့ သာမန်အိမ်ရှင်မတစ်ယောက်ပါ။ ဘိုးဘေးစဉ်ဆက်ချမ်းသာခဲ့ပေမယ့် ၁၉၁၄ခုနှစ်ကနေ စီးပွားရေးအဆင်မပြေဖြစ်ပြီး ဆင်းရဲတွင်းနက်ခဲ့ရပါတယ်။ စီးပွားရေးကြပ်တည်းတဲ့အတွက် သူ့ငယ်ဘဝကလည်း […]
ဝါရင့်ဘန့်ဖတ် (Warren Buffett) ရဲ့ ပိုက်ဆံစကား
ချမ်းသာဖို့ အခြေခံအကျဆုံးလျှို့ဝှက်ချက်ကတော့ မချမ်းသာသေးခင်မှာ စိတ်ဆန္ဒလိုအပ်ချက်တွေကို ထိန်းချုပ်နုိုင်ခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ ကမ္ဘာ့တတိယအချမ်းသာဆုံးသူဌေးကြီး ဝါရင့်ဘန့်ဖတ် (Warren Buffett) ဆိုရင် ပုဂ္ဂလိကဂျက်လေယာဉ်ကုမ္ပဏီ NetJets ကို တည်ထောင်ထားပေမယ့် ခရီးသွားတဲ့အခါမှာတော့ အပိုငွေမကုန်အောင်လို့ ကိုယ်ပိုင်ကားလေးနဲ့ပဲ သွားပါတယ်။ အဲဒီတော့ ငွေကြေးကိစ္စနဲ့ပက်သက်ပြီးတော့လည်း ဝါရင့်ဘန့်ဖတ်ဆီကနေ ဘာတွေသင်ခန်းစာယူရမလဲဆိုတာကို Akhayar-Lifestyle ကနေ တင်ဆက်လိုက်ပါတယ်။ ၁။ စွန့်ဦးတီထွင်တစ်ယောက်လို တွေးခေါ်ပါ။ ဝါရင့်ဘန့်ဖတ်ဟာ ၁၃နှစ်ကတည်းက အခွန်ဆောင်လာတဲ့သူပါ။ ကလေးအရွယ်တုန်းမှာ ဘာတွေလုပ်ရသလဲဆိုရင် တစ်အိမ်ဆင်းတစ်အိမ်တက် သတင်းစာလိုက်ပို့တယ်၊ ဆိုဒါလိုက်ရောင်းတယ်၊ ပီကေလိုက်ရောင်းတယ်စသဖြင့်ပေါ့။ ရောင်းလို့ရတဲ့အမြတ်ငွေတွေကို စုဆောင်းပြီးတော့ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံဖို့ပဲ စဉ်းစားနေတယ်။ ၁၃နှစ်သားတုန်းက သူများတွေ ကိုယ်ထူကိုယ်ထအလုပ်လုပ်နေတုန်းမှာ ကျွန်တော်တို့တွေ မိဘဆီမှာ လက်ဖြန့်တောင်းနေတုန်းပဲရှိပါသေးတယ်။ ၂။ ရှာနိုင်တာထက် လျှော့သုံးပါ။ […]
Leaders Lifestyle Motivation
လူတွေက ကိုယ့်မှာအားနည်းချက်ရှိရင် ရည်မှန်းချက်ကြီးကြီးတွေ၊ အိပ်မက်အကြီးတွေ မမက်ရဲတော့ဘူး။ တကယ်တမ်းတော့ လက်တွေ့အကောင်အထည်ဖော်ဖြစ်ဖို့ အိပ်မက်က ပထမခြေလှမ်းပါပဲ။ အမြင့်ဆုံးအိပ်မက်တွေပဲ မက်လိုက်စမ်းပါ။ စိတ်ကူးနဲ့တည်တဲ့ဘုရားက သဲပုံစေတီ မဖြစ်ပါစေနဲ့။ ဒီတစ်ပတ်မှာတော့ အောက်ခြေလူတန်းစားဘဝကနေ ကမ္ဘာကျော်ဖြစ်လာတဲ့ လူတစ်ယောက်အကြောင်းကို မိတ်ဆက်ပေးချင်ပါတယ်။ သူ့နာမည်က ရာဂျစ် ဘာတီးယာ (Rajiv Bhatia) ။ ရာဂျစ် ဘာတီးယာ ကို ၁၉၆၇ခုနှစ် အိန္ဒိယနိုင်ငံ အမ်ရစ်စာမြို့ (Amritsar) မှာ မွေးတယ်။ ဒေလီ (Delhi) မြို့မှာ အထက်တန်းအောင်ပြီးတော့ ကောလိပ်တက်ဖို့ မွန်ဘိုင်း (Mumbai) ကို ထွက်လာခဲ့တယ်။ ကောလိပ်မပြီးသေးခင်မှာပဲ ကိုယ်ခံပညာသင်ယူဖို့ ဘန်ကောက်မြို့ (Bangkok) ကို ချီတက်လိုက်ပြန်တယ်။ ငွေကြေးအခက်အခဲဖြစ်တဲ့အတွက် […]
သူတို့တွေ ဘာလို့ကိုယ့်ထက် သာသွားတာလဲ
တစ်ခါတုန်းက မောင်သိန်းနဲ့ မောင်သောင်းဟာ ဘွဲ့ရပြီးတဲ့နောက် ကုမ္ပဏီကြီးတစ်ခုမှာ အလုပ်ဝင် လုပ်ကြပါတယ်။ နှစ်ယောက်စလုံးဟာ အလုပ်ကို ကြိုးစားလုပ်ကြပါတယ်။ နှစ်အနည်းငယ်ကြာတဲ့ အခါမှာတော့ သူဌေးက မောင်သိန်းကို အရောင်းမန်နေဂျာအဖြစ် ရာထူးတိုးပေးလိုက်ပေမယ့် မောင်သောင်းကတော့ အရောင်းသမားအဖြစ်နဲ့ပဲ လုပ်နေရပါတယ်။ အလုပ်ဝင်တုန်းကလည်း အတူတူ၊ အလုပ်လုပ်တာလည်းအတူတူ၊ သူ့ကျတော့ ရာထူးတိုးပြီး ငါကို ဘာလို့ရာထူး တိုးမပေးတာလဲဆိုပြီး မောင်သောင်းဟာ စိတ်ဆိုးနေခဲ့ပါတယ်။ ဆက်ပြီး သည်းမခံနိုင်တော့တဲ့အတွက် အလုပ်ထွက်စာရေးပြီး သူဌေးဆီ သွားတယ်။ ” ဒီမှာသူဌေး . . . ကျနော်နဲ့မောင်သိန်း အလုပ်ဝင်တုန်းက အတူတူပဲ၊ ကျနော်အလုပ်လည်း ကြိုးစားရဲ့သားနဲ့ ရာထူးမတိုးဘူး။ သူ့ကျတော့ မန်နေဂျာဖြစ်သွားပြီ။ အဲကိစ္စ ခင်ဗျားကို မကျေနပ်ဖူး။ […]
တစ်နေ့မှာ လူငယ်တစ်ယောက်က ဂရိအတွေးအခေါ်ပညာရှင် ဆိုကရေးတီး (Socrates) ကို အောင်မြင်မှုအတွက်လျှို့ဝှက်ချက်အကြောင်းကို မေးမြန်းခဲ့ပါတယ်။ ဆိုကရေးတီးဟာ သူ့အား နောက်နေ့မနက် မြစ်ကမ်းနံဘေးမှာ လာရောက်တွေ့ဆုံဖို့ ချိန်းဆိုလိုက်ပါတယ်။ မြစ်ကမ်းမှာတွေ့ကြတော့ ဆိုကရေးတီးဟာ လူငယ်လေးအား မြစ်ဆီသို့ တည့်တည့်လမ်းလျှောက်ရအောင် ပြောဆိုပါတယ်။ သူတို့နှစ်ယောက်ဟာ တဖြည်းဖြည်း မြစ်ထဲကို တရွေ့ရွေ့ဆင်းလာကြပါတယ်။ ခြေထောက်မှ ဒူးဆစ်၊ ဒူးဆစ်မှ ပေါင် ၊ ပေါင်မှ ရင်ဘတ် တဖြည်းဖြည်း ရေထဲကို ရောက်လာပါတယ်။ လည်ပင်းအထိ မြုပ်လောက်တော့ ဆိုကရေးတီးက လူငယ်လေးရဲ့ ခေါင်းကို ရုတ်တရက်ရေထဲ နှစ်လိုက်ပါတယ်။ လူငယ်လေးလည်း ရေမွန်းလွန်း၍ ရုန်းကန်ပေမယ့် ဆိုကရေးတီးမှာ သန်မာလွန်းသူဖြစ်တဲ့အတွက် မရုန်းကန်နိုင်ခဲ့ပါဘူး။ လူငယ်လေးရဲ့အရေပြားပြာနေတဲ့အထိ ရောက်တော့မှ ဆိုကရေးတီးဟာ […]
Steve Jobs ပြောတဲ့ “Stay Hungry. Stay Foolish”
Steve Jobs ပြောတဲ့ “Stay Hungry. Stay Foolish” (2005 ခုနှစ်၊ June လ ၁၂ ရက်တွင်၊Stanford ဘွဲ့နှင်းသဘင်၌ Apple နှင့် Pixar Animation Studios တို့၏ CEO ဖြစ်သူ Steve Jobs ၏ Speech အား ကိုးကားရေးသား ထားခြင်း ဖြစ်ပါသည်။) ကမ္ဘာ့အကောင်းဆုံး တက္ကသိုလ် တွေထဲက တစ်ခုဖြစ်တဲ့ ဒီ တက္ကသိုလ် ရဲ့ ဘွဲ့နှင်းသဘင်မှာ ခင်ဗျားတို့နဲ့ အတူရှိခွင့်ရတဲ့အတွက် ဂုဏ်ယူမိပါ ရဲ့။ ကျုပ်ဟာ ဘွဲ့ရကျောင်းပြီး လူတစ်ယောက်မဟုတ်ပါဘူး။ အမှန်အတိုင်း ဝန်ခံရရင် တစ်သက်နဲ့ တစ်ကိုယ် ကောလိပ်ကျောင်းဆင်းပွဲ […]
သရဲနီ တို့၏အခမ်းနားဆုံး ကြယ်တစ်ပွင့် (သို့မဟုတ်) Sir Alex Ferguson
သရဲနီ တို့၏အခမ်းနားဆုံး ကြယ်တစ်ပွင့် (သို့မဟုတ်) Sir Alex Ferguson Manchester United လို့ပြောလိုက်တာနဲ့ ကျွန်တော်တို့ အမြဲသတိရနေသူ တစ်ဦးရှိပါတယ်။ မန်ယူ ဖန်တွေကတော့ တန်းသိကြမှာပါ။ ဟုတ်ပါတယ်။ သူကတော့ Manchester United ဘောလုံးအသင်းရဲ့ ပဲ့ကိုင်ရှင် နည်းပြဟောင်း တစ်ဦးဖြစ်တဲ့ Sir Alex Ferguson ပါပဲ။ ကျွန်တော်တို့ နှစ်သက်လှပါချည်ရဲ့ဆိုတဲ့ Manchester United အသင်းကို ၁၉၈၆ ခုနှစ်ကနေ ၂၀၁၃ခုနှစ်အထိ နည်းပြအဖြစ် ကိုင်တွယ်ပြီး ဖလားပေါင်းများစွာ ရရှိအောင်စွမ်းဆောင်ပေးနိုင်ခဲ့သူ။ကျွန်တော်တို့မျိုးဆက်မှာ မန်ယူ ရယ်၊ကျွန်တော်တို့ရယ်၊ဖာဂူဆန် ရယ်ဆိုတာ နှစ်ပေါင်းများစွာ တူတူကြီးပြင်းလာကြတယ်ဆိုရင်လဲ မမှားပါဘူး။ဖာဂူဆန်ဟာ တစ်ခါတစ်လေ စိတ်ဆတ်၊လက်ပေါက်ကပ်၊အော်တတ်ငေါက်တတ်၊(David Beckham ကိုတောင် […]
Steve Jobs ပြောတဲ့ “Stay Hungry. Stay Foolish” Part (3)
Steve Jobs ပြောတဲ့ “Stay Hungry. Stay Foolish” Part (3) သေခြင်းတရား ကျုပ်အသက် (၁၇)နှစ်လောက်ကဖြစ်မယ်ထင်တယ်။စာဆိုတစ်ခုဖတ်လိုက်ရတယ်။”နေ့စဉ်နေ့တိုင်းကို သင့်ရဲ့နောက်ဆုံးနေ့လိုနေထိုင်ရင်းနဲ့မှ တစ်နေ့နေ့မှာ အမှန်တရားနဲ့ မသွေတမ်း တွေ့ကြုံရမှာပါ”တဲ့ လေ။ ဒီစာဆိုလေးကို ကျုပ်တော်တော် နှစ်ခြိုက်မိတယ်။ဖတ်မိပြီးနောက်ပိုင်း သုံးဆယ့်သုံးနှစ်လုံးလုံး မနက်တိုင်း၊မနက်တိုင်း ကြည့်မှန်ရှေ့မှာရပ်ပြီး ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် မေးခွန်း တစ်ခု အမြဲမေးဖြစ်ခဲ့တယ်ဗျ။အဲဒီမေးခွန်းကတော့”ဒီနေ့မှာများ ငါသာ သေရမယ်ဆို၊ ဒီနေ့လုပ်စရာရှိတဲ့အရာတွေကို ငါ လုပ်ချင်ပါ့မလား” ဆိုတာပါပဲ။ ကိုယ့်မေးခွန်းကိုယ် ပြန်ဖြေတိုင်းအဖြေက “ဟင့်အင်း၊မလုပ်ချင်ဘူး” ဆိုတဲ့ ရက်တွေ ဆက်တိုက်ဖြစ်လာပြီဆိုရင်တော့ ကျုပ်တစ်ခုခု ပြောင်းလဲရတော့မယ် ဆိုတာ သိလာရတယ်။ ငါတစ်နေ့တော့ သေရမယ်ဆိုတဲ့ အသိက ကျုပ်ဘဝမှာ အရေးကြီး ဆုံးဖြတ်မှုတွေပြုလုပ်တဲ့အခါ […]
Steve Jobs ပြောတဲ့ “Stay Hungry. Stay Foolish” Part (2)
Steve Jobs ပြောတဲ့ “Stay Hungry. Stay Foolish” Part (2) ကျရှုံးမှုများ – ချစ်ခြင်းတရား နှင့် Steve Jobs ကျုပ် ကံကောင်းခဲ့တယ်။ ကျုပ်ဘာလုပ်ချင်တယ်ဆိုတာကို ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် ဘဝမှာ စောစီးစွာ သိခဲ့လို့ပေါ့။ ကျုပ် အသက် ၂၀ လောက်မှာ Woz နဲ့ပေါင်းပြီး အဖေတို့ဂိုထောင်လေးထဲမှာ Apple ကိုစလုပ်ခဲ့ကြတယ်။ ကျုပ်တို့ အတော်ကြီးကို ကြိုးစားခဲ့ကြရတာ။နှစ်ယောက်ထဲ ဂိုဒေါင်လေးကနေအစပြုလိုက်တဲ့ အစက နောင် ၁၀ နှစ်အကြာမှာဝန်ထမ်းပေါင်း (၄၀၀၀)ကျော်နဲ့ ဒေါ်လာ ၂ ဘီလျံ တန် Apple Company ကြီးရယ်လို့ ဖြစ်လာခဲ့တယ်။ ကျုပ်တို့ရဲ့ အကောင်းဆုံး […]
Dropbox ရဲ့ CEO ဖြစ်သူ ဘီလျံနာ Drew Houston ၏ ဝှက်ဖဲ သုံးချပ်	Joker
Dropbox ရဲ့ CEO ဖြစ်သူ ဘီလျံနာ Drew Houston ၏ ဝှက်ဖဲ သုံးချပ် ဘွဲ့နှင်းသဘင်အခမ်းအနားတစ်ခု။ ဒါ့ထက်တိကျသေချာအောင် ပြောရရင် (MIT – Massachusetts Institute of Technology) မက်ဆာချူးဆက် နည်း ပညာတက္ကသိုလ်ရဲ့ ဘွဲ့နှင်းသဘင်အခမ်းအနား။မိုးလေးက တစ်ဖွဲဖွဲရွာနေပေမယ့် ဘွဲ့ရသူတွေအားလုံးရဲ့ အာရုံက စင်မြင့်ထက်ဆီမှာရှိနေလေရဲ့။ စင်မြင့်ထက်မှာ နေရာယူထားသူက သူတို့ရဲ့ စီနီယာဖြစ်တဲ့ Drew Houston။ အသက် ၃၃ နှစ်အရွယ်နဲ့ ဘီလျံနာတစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့အထိ ကြိုးစားထွန်းပေါက်ခဲ့သူတစ်ဦး။ ယနေ့ Online သုံးနေသူတွေရဲ့ လိုအပ်ချက်တွေကို ဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်ခဲ့တဲ့ Dropbox ရဲ့ တည်ထောင်သူ ။ငယ်ငယ်ရွယ်ရွယ်နဲ့ ဘီလျံနာတစ်ဦးဖြစ်လာခဲ့ပုံက ဘယ်လိုများပါလဲ။ စိတ်ဝင်စားစရာပါပဲ။ […]
ဝါရင့်ဘန့်ဖတ် (Warren Buffett) ရဲ့ ပိုက်ဆံစကား	Kyaw Soe Aung
သူတို့တွေ ဘာလို့ကိုယ့်ထက် သာသွားတာလဲ	Kyaw Soe Aung
စားပွဲထိုးဘဝမှသည် ကမ္ဘာကျော်မင်းသားဖြစ်လာသူ	Kyaw Soe Aung
သူဌေး မှသည် ခေါင်းဆောင် ဆီသို့	Joker
သူဌေး မှသည် ခေါင်းဆောင် ဆီသို့ တကယ်တော့ သူဌေး နဲ့ ခေါင်းဆောင် ဆိုတာ မတူညီတဲ့ Title (၂) ခုပါ။ သူဌေးဆိုတာ အများအားဖြင့် ကိုယ့်အကျိုးစီးပွား အတွက် ဝန်ထမ်းတွေခန့်အပ်ထားပြီး ကိုယ့်လုပ်ငန်းတိုးတက်အောင် မောင်းနှင်တဲ့သူမျိုး၊ ကိုယ့်လုပ်ငန်း တိုးတက်ဖို့အတွက် အခြားသူတွေကို ဂရုမစိုက်သူမျိုး ကို ဆိုလိုတာဖြစ်ပြီး ခေါင်းဆောင် ဆိုတာကတော့ ကိုယ်နဲ့တကွ ကိုယ့် Team ကိုပါ လိုက်ပါတိုးတက်စေလိုသူ၊ ဦးဆောင်မှုပေးနိုင်သူ၊ အခြားသူတွေရဲ့ ဘဝတွေကို တည်ဆောက်ရင်း ကိုယ့်လုပ်ငန်းကို မောင်းနှင်သူမျိုးကို ဆိုလိုပါတယ်။ တကယ်လို့ သင်က သူဌေး ဖြစ်နေပြီဆိုရင်တော့ သင့်ရုံးမှာ သင့်ကို ချစ်သူထက် မုန်းသူက ပိုများနေမှာ သေချာပါတယ်။ […]